Nagarik Shukrabar - निर्मला प्रकरण : आजीसाप,अब कसलाई समात्ने !
शनिबार, २६ माघ २०७५, ०८ : ३५ | केपी ढुंगाना
किशोरी निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या घटनाको अनुसन्धान पद्धति र प्रमाणबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बनाएको विज्ञ समूहले माघ १३ गते सरकारलाई निर्देशन दियो, ‘डिएनएको परीक्षण त्रुटिपूर्ण देखिएकाले अब यसको मात्र भर नपरी ह्युमन इन्टेलिजेन्सको माध्यमद्वारा प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुसन्धान जारी राख्नू ।’
पन्तको भेजाइनल स्वाबबाट निस्किएको पुरुष डिएनएलाई नै मुख्य प्रमाण नमानी बयान र परिस्थितिजन्य अवस्थालाई पनि आधार बनाउँदा शंकास्पद पहिल्यै देखिइसकेका थिए तर डिएनए नमुनाले साथ दिएन ।
अर्को पाटो, यो ६ महिनाको बीचमा ‘ह्युमन इन्टेलिजेन्स’ले शंकास्पद देखाएका अधिकांश पक्राउ परिसकेका छन् । बयान भएको छ तर डिएनए नमिल्दा छुटेका छन् ।
अनुसन्धान गिजोलिनुसम्म गिजोलिइसकेपछि मात्र आयोगले डिएनए मात्र नहेर्नु भनेपछि अनुसन्धानरत प्रहरी अन्योलमा देखिएका छन्, ‘नयाँ शंकास्पद खोज्ने कि पहिला पक्राउ परेर डिएनए नमुनाका कारण मुक्त भएकालाई पुनः पक्राउ गरेर बयान लिने ?
अनुसन्धान स्रोतका अनुसार ६ महिनाको बीचमा घटनामा संलग्न हुनसक्ने देखिएका जति प्रायः सबैमाथि अनुसन्धान भइसकेको छ । बाँकी एक जना मात्रै हुन्, जसको न नाम थाहा छ न ठेगाना नै । निर्मलाको बलात्कार र हत्या भएको स्थानतिर बसेर महिलालाई यौनाङ्ग देखाउने गरेको सूचनाको आधार ती व्यक्तिको स्केचसम्म बनाएको छ प्रहरीले, बाँकी विवरण छैन ।
यसले आयोगको निर्देशनपछि प्रहरी अनुसन्धान पुरानै शंकास्पदतिर फर्कन सक्ने देखिन्छ ।
तर के पक्राउ परेर डिएनए नमुना नमिलेको आधारमा छुटेकाहरु पुनः पक्राउ पर्न सक्छन् ?
‘छुटेकाहरु शंकाको घेराबाट बाहिर छैनन्,’ प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले शुक्रवारसँग भने, ‘पक्राउ परेर छुटेकाहरु फेरि पक्राउ पर्न सक्छन् ।’
पक्राउ परेर छुटेकाहरु पुनः पक्राउ परे भने फेरि को–को पक्राउ पर्न सक्छन् त ?
जसले बयान फेरिरहे
भारतको मुम्बईमा काम गर्ने चक्रराज वडु निर्मला बलात्कार र हत्या अनुसन्धानमा सबैभन्दा पहिला शंकाको घेरामा परेका थिए । उनी शंकाको घेरामा पर्नुको पहिलो कारण घटनास्थल नजिकै रहेको उनको घर थियो ।
प्रहरीले जब उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ शुरु गर्यो, उनीमाथिको शंका बलियो बन्दै गयो ।
घटना भएको दिन साउन १० मा उनी कहाँ थिए भन्नेमा उनी र उनको परिवारका सदस्यले दिएको जानकारी बाझिनु, उनको मोबाइलमा घटनास्थलका तस्बिर देखिनु तर त्यो कहाँबाट आयो भन्ने विषयमा फरक–फरक बयान दिनु अनि उनले कतै झुट त बोलेका छैनन् भनेर गरिएको वैज्ञानिक परीक्षण पोलिग्राफमा असफल हुुनुले उनी शंकाको घेरामा परेका थिए ।
साउन १० गते साढे २ बजेतिर साथीको घरबाट निस्किएकी निर्मलाको बलात्कार र हत्या साढे २ देखि ४ को बीचमा भएको अनुसन्धानकर्मीको निष्कर्ष थियो ।
सो समयमा वडु कता थिए भन्ने खोतल्दा उनले ‘घरमै बसेको थिएँ’ भने । बहिनीले ‘दाइ मिल जानु भएको थियो’ भनिन् ।
उनी निर्मलाको शव फेला परेको दिन साउन ११ गते घटनास्थल गएका थिए कि थिएनन् भन्ने बयान र फेला परेका तथ्यले ठूलो शंका उब्जाएको थियो । उनकी श्रीमतीले उखुबारीमा गएको बताए पनि उनको नगएको जवाफ सत्य देखिएन ।
उनको मोबाइलमा घटनास्थलको तस्बिर भए पनि डिलिट गर्नुले समेत उनीमाथिको शंका बढाएको थियो । प्रहरीले उनको मोबाइलबाट डिलिट गरेको तस्बिर रिकभर गरायो, जसबारे उनले प्रस्ट जवाफ दिन सकेनन् ।
उनी शंकाको घेरामा परेकाले पहिलो डिएनए परीक्षण उनकै भएको थियो, जुन नमुना म्याच भएन र शंका हुँदाहुँदै उनी मुक्त भए ।
पटक–पटक ढाँट्नेबाहेक वडुबारे प्रहरीसँग थप प्रमाण अझै फेला परेको छैन । तर मानव अधिकार आयोगले दिएको निर्देशन अनुसार ‘डिएनए’ बाहेकको अवस्था र घटनाक्रममा उनी शंकाबाट मुक्त देखिदैनन् ।
जसले २० रुपैयाँको राज खोले
प्रहरीले हेमन्ती भट्ट, जीवन घर्तिमगर, दीपक नेगी लगायतलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो । शंकाको आधारमा नियन्त्रणमा लिए पनि उनीहरु घटनामा संलग्न हुनसक्ने आधार फेला नपर्दा अनुसन्धान अगाडि बढ्न सकेन ।
यसैबीच भदौ ४ मा आरोपीको रुपमा प्रहरीले दिलिप सिंह विष्टलाई सार्वजनिक गर्यो । यहाँबाट अनुसन्धानले अर्कै मोड लियो ।
उनलाई निर्मला बलात्कार र हत्याको आरोपीको रुपमा सार्वजनिक गर्दा प्रहरीले उनको बयान र उनको पृष्ठभूमिलाई मुख्य आधार बनाएको थियो । बयान स्वीकारेको आए पनि उनको डिएनए नमुना नमिलेपछि हिरासतमुक्त भए ।
प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार अन्यझैँ उनी पनि अझै शंकामुक्त भने छैनन् । उनी अझै शंकामा रहनुको मुख्य कारण उनकै बयान देखियो ।
घटनाको छानविनका लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको अनुसन्धान टोली समक्ष विष्टले दिएको बयानमा ‘यातना दिएर घटना स्वीकार्न लगाएको’ दावी गरेका थिए । शुक्रवारले विष्टसँग जोडिएका ४ वटा क्लिप हेर्दा सबै यातना दिएर योजनाबद्ध रुपमा घटना स्वीकार्न लगाएर खिचेको झैँ देखिन्न ।
एउटा दृश्यमा उनले दिएको बयान बनावटी देखिए पनि अन्य भिडियो क्लिपमा यातना दिएर बोल्न लगाएझैँ देखिँदैन ।
साढे चार मिनेटको एउटा भिडियोेमा विष्टसँगको सवाल जवाफ यस्तो छः
‘मेरो साइकलको चेन बिग्रियो बनाइदेऊ भनेँ । साइकलको चेनसेन बनाइदिए । मेरो मनमा पनि त्यस्तै भयो पाप जाग्यो । जोश आयो । मलाई दिने हो ? सुरुसुरु भनेको मानेन । साइकल समातेर खोलामा फालिदिएँ । उनलाई उठाएर खोलापारि ऊखुबारीमा लगेँ । उखुबारीमा लगेपछि सुताएर सेक्स गरेँ । सेक्स गरेपछि उनले रुन कराउन हल्ला गर्न थालिन् । अब सबैले थाहा पाइहाल्ने हुन् भनेर घाँटी दाबेर तिनलाई मारिदिए । अनि त्यसपछि अलि टाढा गन्ना (ऊखु)को खेतमा सेपरेट तरिकाले राखिदिएँ । ऊखुबारी हुँदै आफ्नो घर आएँ ।
उनी अगाडि भन्छन्, ‘हात धोएँ, चौराहामा राजु थापा भेट भयो । हात मिलाएँ ।’
केटीको सबै कपडा खोल्यौ कि तलको मात्रै ?
‘उनको कुर्ता थोडा फाट्या पनि थियो । आफैँले कपडा फुकालेको थिएँ । माथिको फुकालिन, तलको मात्र फुकालेँ । एउटा खुट्टाको मात्र फुकालेँ । उसको गोजीमा २० रुपैयाँ थियो । त्यो निकालेर खर्च गरेँ, गुट्खा खाएँ । गोपाल गुरुङ नजिकै दोकाननिर गएर गुट्खा र चुरोट किनेँ । त्यहाँबाट खोलापारि घर पुगेँ । घर पुग्दा रात परेको थियो ।’
केटीलाई लिएर खोलापारि जानेबेला पानी कति थियो ?
‘घुँडाभरि थियो । बोक्दा पछाडि पिठ्यूँमा बोकेको थिएँ । सजिलै उक्लिएँ । पारि गएर सिमलको रुखको तल सुताएँ ।’
यो क्लिप बयान लिनेक्रममा प्रहरीले विष्टलाई थाहै नदिई लुकाएर खिचेको देखिन्छ ।
दोस्रो ७ मिनेट १५ सेकेन्डको क्लिप छ । सो क्लिप प्रहरीको बयान लिने कोठामा लिएको देखिन्छ । पहिलो क्लिपमा उनको अनुहार राम्रोसँग नदेखिए पनि दोस्रोमा प्रस्टै देखिन्छ । उनी केही नर्भस देखिएका छन् यसमा ।
दोस्रो क्लिपमा उनले आफू एक्लैले घटना गराएको दाबी गर्दै किशोरीसँग कसरी भेट भयो, कसरी लगे भन्ने बयान दिएको देखिन्छ ।
दोस्रो क्लिपमा उनले निर्मलालाई चिनेको दाबी गर्छन् तर लामै केराकारपछि नचिन्ने बताउँछन् । दोस्रो क्लिपको बयानमा पनि उनको पहिलो क्लिपसँग बाझिन्न । स्रोतका अनुसार यो क्लिप प्रहरीले पत्रकार बनेर जानकारी दिएर खिचेका थिए । बयानको बीचमा बयान लिनेले ‘तपाईंलाई बजारभरि मान्छेले हेरिरहेको छन्, टिभीमा लाइभ गइरहेको छ’ भनेका छन् ।
डेढ मिनेटको तेस्रो क्लिपमा उनले निर्मलालाई कसरी नियन्त्रणमा लिए, कसरी खोलापारि लगे अनि कसरी घाँटी दाबेर मारेँ बयान दिएका छन् । यही क्लिपमा उनले भोकल कर्ड भाँचेको र ताइक्वान्दोको गुरु प्रेमसिंह धामीले भोकल कर्ड भाँच्न सिकाएको बताएका छन् । यो बयानमा उनी तनावमै देखिन्छन् ।
साढे तीन मिनेटको चौथो भिडियो क्लिपमा बयानको पद्धति प्रहरीको बयान प्रक्रिया अनुसारकै छ । यसमा उनले दिएको विस्तृत बयान प्राकृतिक देखिन्न । घोकेझैँ देखिन्छ ।
एकपछि अर्को क्लिपमा उनको बयानका कुरा नबाझिए पनि अन्त्यमा डिएनए नमिल्दा उनी मुक्त भए । पक्राउ परेका शंकास्पद व्यक्तिहरुमध्ये उनले दिएको बयान घटनासँग नजिक देखिन्छ ।
परिवारले किन ढाँटे ?
गृह मन्त्रालयको समितिसमक्ष परिवारका सदस्यले दिएको बयान र प्रहरीले लुकेर खिचेको उनको घरका सदस्यको भनाइ बाझिएको देखियो ।
समितिसमक्ष दिएको बयानमा उनको परिवारका सदस्यले घरमा दुःख दिने नगरेको दाबी गरे पनि शुक्रवारले प्राप्त गरेको विष्टको परिवारको भिडियो क्लिपमा ‘घरमा डरैडरमा बस्नु परेको, जेल बसेको आएको हुँ फेरि मारेर जाउँला भनेर थर्काउने गरेको, दिमागी अवस्था राम्रै रहेको, मैयाँ भनेर बोलाउने, तल जाँदा तलै आउने, माथि जाँदा माथि जाने गरेपछि प्रहरीलाई बोलाइदिऊँ भनेपछि त्यस्तो नगरेको’ जस्ता उल्लेख छ ।
तर विष्टको बयानबाहेक घटनामा उनको संलग्नताको पुष्टि गर्ने थप बलियो प्रमाण अझेै छैन । अनुसन्धानका लागि केन्द्रबाट गएको तात्कालीन एसएसपी ठाकुर ज्ञवालीको नेतृत्वको टोलीले घटनाको दिन २ बजेको आसपास विष्टलाई घटनास्थल वरपर देखेको बताउने एक स्थानीय फेला पारेको थियो । यत्ति हो थप उपलब्धि ।
विश्वासमा थप क्षति
विष्टको रिहाईपछि सुस्ताएको प्रहरीले एक्कासि मंसिर १८ मा निर्मला बलात्कार र हत्या घटनामा संलग्न रहेको दाबी गर्दै काठमाडौँबाट प्रदीप रावललाई पक्राउ गर्यो, विशाल चौधरीलाई कञ्चनपुरबाट काठमाडौँ ल्यायो ।
रावल पहिलो पटक यस केसमा पक्राउ परेका थिएनन् । पहिल्यै नियन्त्रणमा लिएर मुक्त भएका थिए । गाउँमा निर्मला मेरी गर्लफ्रेन्ड बन्दै हिँडेको, घटनालगत्तै भारत गएको लगायतका आधारमा पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएका रावल र चौधरीले घटना स्वीकार गरिसकेको दाबी गर्दै प्रहरीले उनीहरु नै घटनाका अभियुक्त रहेको दाबी गरे पनि आखिर पुसमा आएर यी दुवै रिहा भए ।
चौधरीलाई मुक्त गरे पनि रावललाई केही दिन थप हिरासतमा राखेको प्रहरीले पुस ११ मा मुक्त गर्न बाध्य भयो । दुवै मुक्त हुनुको कारण डिएनए नमुना नमिल्नु बताइए पनि प्रहरीले भने यसबारे औपचारिक रुपमा केही सार्वजनिक गरेन ।
यी दुवैलाई प्रहरीमाथि दुव्र्यवहार गरेको नक्कली आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हिरासतमा राखिएको थियो ।
चौधरी रिहा हुनुको कारण घटनाको दिन उनी कुखुरा चोरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेको देखिएपछि प्रहरीलाई उनलाई पक्राउको कारणबारे प्रतिरक्षा गर्नै हम्मे पर्यो ।
रावलले घटना स्वीकारेको दाबी गरिए पनि बयानबाहेक थप प्रमाण थिएन र बयान पनि विश्वसनीय देखिएन तर यी दुवै किशोर मुक्त हुनुको कारण भने डिएनए स्याम्पल नमिल्नु नै थियो ।
आधार छैन, तर शंका छ
कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्टका छोरा किरणराज विष्ट, स्थानीय आयुष विष्ट, निर्मला ट्युसन पढ्न गएको घरकी दिदी बहिनी अनिता बम र आँचल बम पनि यो घटनामा शंकामा परे ।
बम दिदी बहिनीको विषयमा त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको असोज २१ को निर्देशनमा ‘शंकाको घेरामा राखेर अनुसन्धान गर्न’ सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । किरणको हकमा गृह मन्त्रालयको समितिले शंकामा राखेको थियो ।
डिएनए नमुनापछि किरण र आयुष शंकाको रेखाभन्दा बाहिर छैनन्, बम दिदी बहिनीको हकमा उनीहरुको घरबाट हराउनु नै शंकाको आधार देखिएको थियो । घटनापछिका व्यवहारले शंका बढाए पनि थप तथ्य फेेेला परेको देखिन्न।
सञ्जालमा केही ब्यक्तिले शंका गर्दै नाम लेख्नु बाहेक किरण र आयुषको घटनासँग जोडिने प्रमाण देखिन्न । प्रहरीले उनीहरुलाई शंकामुक्त गरिसकेको त देखिदैन तर शंकाको घेराभित्र राखिरहनुपर्ने बलियो आधार पनि देखिँदैन ।
६ महिनाको उपलब्धि
अझै अनुसन्धानले प्रस्ट बाटो नसमाते पनि केही निष्कर्ष भने देखिएको छ । प्रारम्भमा घटना संगठित र पूर्वनियोजित झैँ देखिए पनि ६ महिनाको क्रममा भएको अनुसन्धानले घटना आकस्मिक हो भन्ने लगभग प्रस्ट बनाएको छ ।
उच्च तहका अधिकारीका सन्तानलाई जोड्दै भएको विवाद केवल प्रचारबाजी मात्र देखियो । घटनाको प्रकृतिले समेत यो योजनाबद्ध रुपमा भएको घटना देखाउँदैन ।
पीडितको उमेर र घटनाको प्रकृतिले नशा सेवन गरि होस गुमाएको वा यौन कुण्ठित व्यक्तिको संलग्नताको सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
घटनास्थलबारे भएको लामो बहसपछि जहाँ शव फेला परेको हो, सो स्थान घटनास्थल नभएको र घटनास्थलसम्म पुग्न सकिने भौगोलिक अवस्थाका आधार सोही क्षेत्र आसपास हो भन्नेमा पनि विवाद देखिन्न ।
प्रहरीबाटै सामूहिक बलात्कार भएको दाबी बेलाबखत आउने गरे पनि यो डिएनएका कारण कचल्टिएको अनुसन्धानलाई ट्रयाकमा ल्याउने फण्डा हो भन्नेमा विवाद देखिन्न ।
कहिले कसलाई, कहिले कसलाई आरोपीको रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रहरीको गतिविधिले घटनालाई शंकास्पद बनाएको र घटनामा संलग्नले यही कमजोरीको फाइदा लिएको पनि प्रस्टै देखिन्छ । अहिलेसम्मको तथ्यले प्रभावशाली ब्यक्तिका सन्तानबारे शंका बढाइदिने गतिविधि अनुसन्धानलाई अल्मल्याउने प्रयास देेखियो।
प्रहरी प्रवक्ता सुवेदी मानव अधिकार आयोगबाट निर्देशन आउनुअगाडि नै प्रहरीले प्राविधिकसँगै ह्युमन इन्टेलिजेन्सलाई समेत आधार बनाएर अनुसन्धान जारी राखेको बताउँछन् ।
आयोगको निर्देशनले अनुसन्धानको दायरा भने केही फराकिलो बनाएको उनको विश्लेषण छ ।
‘घटना लगत्तैको प्रहरीको व्यवहारले गर्दा केही शंका बढाएको सत्य हो तर अनुसन्धानमा केन्द्र सहभागी भएपछि गलत नियतले अनुसन्धान गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘आयोगको निर्देशन अगाडि मुख्य आधार डिएनए मात्र थियो, उसले ह्युमन इन्टेलिजेन्सलाई समेत जोड दिएकाले अनुसन्धान केही फराकिलो भने भएको छ ।’
आयोगको निर्देशन र सुवेदीको भनाइले डिएनए भन्दा ह्युमन इन्टेलिजेन्सको पाटो बलियो बनेको देखिन्छ ।
अहिलेसम्म घटनाको प्रत्यक्षदर्शी फेेेेला परेका छैनन्। अनुसन्धानमा संकलन प्रमाण हेर्दा अनुसन्धान निचोडमा पुग्ने आधार बयानमुखी प्रमाण मात्र देखिन्छ ।
दिलिप सिंह विष्टको बयानमा चिप्लिएको प्रहरीले रावल र चौधरीको पक्राउपछि पनि बयानलाई आधार मानेर थप तथ्यको खोजी नगरी उनीहरु नै दोषी झैँ व्यवहार गरेेेको थियो । आयोगलेे ह्ययुमन इन्टेेेेलिजेन्सलाई समेत आधार मानेर अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाइदिएको छ। तर प्रहरीको पुरानो व्यवहारले इमान्दारितामा शंका भने कायम छ ।